Ciidamada Soomaaliya iyo Amisom la wareegay deegaano ka tirsan Hiiraan & Bakool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xudur – Mareeg.com: Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa Alshabaab kala wareegay deegaano hoos yimaadda degmooyinka Xudur ee gobolka Bakool iyo Buulo-barde oo gobolka Hiiraan ah.
Gobolka Hiiraan, ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceyn oo 36 km dhinaca waqooyi-bari uga beegan degmada Buulo-barde, kaddib markii ay ka saareen Al-Shabaab oo horay ugu sugnaa.
Xuseen Hoorow oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in dagaal halkaas ku dhex maray iyaga oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo dadka deegaanka iyo Al-Shabaab uu sababay inay Alshabaab banneyso deegaanka.
Sarkaalka ayaa xusay in labo ka tirsaneyd lagu dilay dagaalka, kuwo kalena dhaawac lagu qabtay, isagoo tilmaamay in deegaanka Ceyn uu ahaa saldhigga ugu weyn ee ay Al-Shabaab ka abaabuli jirtay weerarrada qorsheysan.
Xuseen Hoorow ayaa sheegay in deegaanka ay ciidamadu ka samaysan doonaan fariisimo si loo sugo ammaanka.
Dhinaca kale, ciidamada milateriga Soomaaliya ayaa deegaan ka tirsan degmada Xudur oo lagu magacabo Mooro Gaabey ku weeraray saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanka caan ka ahaa sida uu xaqiijiyay Gudoomiyaha degmada Xudur.
Maxamed Macalin ayaa sheegay in weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ay xalay qaadeen ciidamada, isla markaana ay midna ku dileen mid kalena ku dhaawaceen.
“Deegaanka Mooro Gaabey oo 30-km u jirta Xudur waxaa saldhig u aheyd saraakiil ka tirsan Shabaab, ciidanka bartilmaameedkooda waa ku guuleysteen labo nin oo amiiro ahaa ayay midna dileen midna dhaawaceen, waxay kala ahaayeen magacyadooda C/llaahi Abuukar Cali oo Taliyaha saldhiga Mooro Gaabey ahaa iyo Axmed Maxamed Qeyre oo sarkaal ahaa”ayuu yiri Maxamed Macalin.
Gudoomiyaha degmada Xudur ayaa sheegay in weerarkan uu ku dhacay sidii loogu tala galay, waxaana uu tilmaamay in deegaanada Gobolka Bakool ay ka sameyn doonaan ciidamada howl galo kuwa la mid ah sida uu yiri.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada Gudoomiyaha degmada Xudur ee ah in saraakiil Al-Shabaab ahaa midna dileen midna dhaawaceen.
Alshabaab ayaa horay xayir5aad ugu soo rogay degmooyinka Buulo-barde iyo xudur, halkaasoo ay kala wareegeen ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helay kuwa AMISOM ee ka kala socda Itoobiya iyo Jabuuti.